I-10 eyaziwa kakhulu nge-Anabolic Steroids Raws Material | Iiasteroid zeAASraw
ezaposwa ngomhla 07 / 18 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Ngokwexesha lethu elidlulileyo lokuthengisa idatha ye-4 kunye nemibuzo eyahlukeneyo, sishwankathela i-10 ethandwa kakhulu kwi-anabolic steroids (AAS) ngezinto ezibonakalayo ezinxulumene nama-lab, abadayisi kunye nabathengi.
Siye sanciphisa i-intlanzi yezona zixhobo ezintathu eziphambili. Uluhlu olupheleleyo, khangela i-10 ephakamileyo i-anabolic steroids impahla eluhlaza.
Ukuthengiswa kwezinto ezinkulu ze-AAS Raws ezinkulu: Eyona nto ifanelekileyo yeBhalbhu inexabiso elincinci Elifakwe kwi-AAS Raws Raws: Eyona nto iAral Oral Oraw:
I-testosterone Enathate / i-Testo E / uvavanyo lwe-E powder
Akukho kalo★★★★★ I-Trenbolone Acetate / Tren Ace / Tren Umgubo
Akukho kalo★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol powder
Ixabiso elikhulu lokuthengiswa kwe-AAS ezibonakalayo ezivela kuthi
Ukuphuza okulula kakhulu kunye ne-AAS engcolileyo
I-Trenbolone Acetate powder eluhlaza yomelele kune-Trenbolone Enanthate ngenxa ye-Enanthate ester ethatha ubunzima obungaphezulu kwindawo.
Uninzi lwabasebenzisi abaya kuqala kunye ne-Trenbolone hormone ihlala iTrenbolone Acetate eluhlaza.
I-Dinandrol ingaba luncedo kakhulu kwisakhiwo sokwimitha.
Imiphumo yeDinrolrol ilula ukuyibamba xa kusetyenziswe ukuphela xa kuthelekiswa ne-steroids.
Nazi izinto eziphambili ze-10 ze-Anabolic Steroids ezikrwada:
I-testosterone Enathate ipowder ekrwada- Eyona nto ibalulekileyo yeeSteroids eziGcweleyo
I-Methandrostenolone powder eluhlaza - Uninzi oluqhelekileyo lwe-oral Oral Steroids
I-Trenbolone i-Acetate ipowder eluhlaza - I-Steroids Inamandla onke
I-Oxandrolone powder eluhlaza - Uninzi lwabesetyhini oluqhelekileyo lokusebenzisa imilomo ye-oral Oral Steroids
Stanozolol i powder eluhlaza - Uninzi lwabantu abadumileyo oluqhelekileyo lwe-Lean Gain Oral Steroids
IHormone yokuHlaba koLuntu - Ininzi epheleleyo iPeptide
I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza - Uninzi lweSteroids phantsi
I-Boldenone Undecylenate engamanzi eluhlaza - Uninzi lwe-long-acting steroids
IDrostanolone Propionate ipowder ekrwada - Uninzi lweeSoftware eziPhangaleleyo
I-Methenolone Enanthate umgubo eluhlaza - Uninzi lwee-Effects Side Effects steroids
Kukho iinkcukacha ezimbalwa ezibalulekileyo ukujonga xa ukhetha i-Anabolic Steroids. Kwiilabhu, iimveliso zokudinga kufuneka zenziwe kwiipilisi okanye iifomsile. Isixhobo siya kuba ngumxube, ipilisi yecilisi, isethi ye-capsule, umatshini we-cap, njl. Ezi zixhobo zibiza ixabiso ezininzi kodwa ziya kunceda ukwakha iimveliso zakho kwaye ufumane ishishini elide.
I-Oxandrolone (Anavar) ipowder eluhlaza
I-Stanozolol (i-Winstrol / i-winny) i-powder eluhlaza
Methandrostenolone (Dianabol) umgubo eluhlaza
I-Clostebol Acetate / 4-Chlorotestosterone i-acetate / iTurinabol (iTbol)
Uninzi lwentlukwano yeTestosterone
Uninzi lwechungechunge lweBoldenone
I-DIY kunye ne-Homebrewer
Yenza-wena-i-ngokwakho (i-DIY) abapheki bamakhaya bangcono ukuqala ukusuka ngokulula ukwenziwa kwamayeza esoftware, kunye nendawo encibilikayo encinci kunye neoyile ebonakalayo kunye neoyile yothwali. Isoftware ezinconywayo zingafumaneka apha ngezantsi:
I-Nandrolone Decanoate (DECA) umgubo eluhlaza
I-Trenbolone i-Acetate ipowder eluhlaza
I-Boldenone Undecylenate / Ukulungiselela ulwelo oluluhlaza
I-Teststeorne Yongeza i-powder eluhlaza I-Methandrostenolone powder eluhlaza I-Trenbolone i-Acetate ipowder eluhlaza I-Oxandrolone powder eluhlaza Stanozolol i powder eluhlaza IHormone yoLuntu lokuKhula I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza I-Boldenone Undecylenate engamanzi eluhlaza I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza I-Methenolone Enanthate umgubo eluhlaza
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆
◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
1. I-testosterone Enanthate ipowder ekrwada
Akukho kalo ★★★★★
I-testosterone Enanthate powder eluhlaza yinto eyi-testosterone emsulwa ene-ester ethathe ixesha elide kwaye i-testosterone yodumo oluphezulu. Njengohlobo lwePropionate yenye yeendlela eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwihlabathi liphela ngokuphucula iimbaleki. Ngokuphathelele iipropathi ezisebenzayo ze-Testosterone Enanthate, iziphumo ezifanayo ziya kuthi ngokubanzi zifumaneke ngokuthelekiswa nenguqulelo yePropionate yeedosi ezifanayo.
2. I-Methandrostenolone powder eluhlaza
I-Methandrostenolone eluhlaza ipowder imele enye yezona zinto zidume kakhulu kunye nezinye zeyona nto ibaluleke kakhulu ye-anabolic steroid ngalo lonke ixesha. Ngaphandle kombuzo, le yeyona nto isaziwa kakhulu yeyomlomo. Nangona iphantse ifumaneke njengethebhulethi yomlomo, iMethandrostenolone i-powder eluhlaza inokufumaneka njengesisombululo esinokubanjiswa, kodwa amacwecwe amele indlela ephambili yolawulo.
3. I-Trenbolone Acetate powder eluhlaza
I-acetate ester i-ester efutshane-futshane ifakwe kwi-molecule ye-Finaplix. Ubomi obusebenzayo kwiintsuku ze-2-3 kodwa ukugcina amanqanaba e-trenbolone ephakamileyo kwaye azinzileyo, iintsholongwane zemihla ngemihla zicetyiswa. I-acetate ester inikeza i-hormone ephawulezayo kwaye ephakamileyo ye-hormone ezuzisa abo bafuna ukufumana ngokukhawuleza, kunye nexesha lokucoca ngokukhawuleza i-acetate ester inokupheliswa ekuqalekeni kweziphumo ezimbi.
4. I-Oxandrolone powder eluhlaza
5. I-Stanozolol eluhlaza powder
Ngelixa enye ye-anabolic steroid eyaziwayo, i-Stanozolol eluhlaza ipowder ithandwa kakhulu phakathi uninzi kwi-steroid isebenzisa inani labemi. Ngeendlela ezininzi i-anabolic steroid efanelekileyo inobulali enokusetyenziswa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabasetyhini. Ngokubaluleke kakhulu, ibonakalise iyasebenza kakhulu kwimizamo yokuphucula intsebenzo.
6. IHormone yoLuntu lokuKhula
7. I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza
I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza yenye yezona zinto zisetyenziswa ngokufuthi i-anabolic steroids phakathi kokuphucula iimbaleki. Kuyaziwa ngokuba yinzuzo enkulu kwi-non-msimu we-steroid enomdla, kodwa ikwayintandokazi kwimidlalo emininzi yezemidlalo kwizibonelelo zayo zonyango. Ngenxa yokuxhamla kakhulu kunyango, i-Nandrolone hormone yenye yezona zinto zibalulekileyo ze-anabolic steroid kwezonyango.
8. I-Boldenone Undecylenate engamanzi eluhlaza
I-Boldenone Undecylenate engamanzi eluhlaza yi-testosterone ethathwe kwi-anabolic androgenic steroid kwaye iyimo eguqukayo ngokwendlela ye testosterone. Utshintsho oluncinci kakhulu kwisibopho esongeziweyo kabini kwikhabhoni kunye nesikhundla esinye. I-estecylenate ester ivumela ukukhutshwa kwethanga eBoldenone malunga ne-3-4 kwiintsuku emva kwenaliti, ngokuthe chu ngokuthe ngcembe kokukhutshwa kwehormoni yokulandela malunga neentsuku ze-21.
9. I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza
Uninzi lwayo yonke i-Masteron kwimarike iya kuba yi-Drostanolone Propionate powder eluhlaza. I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza yi-dihydrotestosterone (DHT) evela kwi-anabolic steroid. Ngokukodwa, i-Masteron yi-DHT i-hormone etshintshwe ngendlela eyongeziweyo yokongezwa kweqela le-methyl kwisikhundla se-carbon 2, Oku kukhusela i-hormone ekuqhekekeni kwe-metabolic yi-3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, efumaneka kwimisipha yamathambo. Ikwanyusa kakhulu imeko ye-anabolic yehomoni.
Enye yezona zinto zidumileyo phakathi kwabo bantu bakhuphisanayo okanye abafuna iphysonic yokuhombisa
10. I-Methenolone Enanthate umgubo eluhlaza
I-Methenolone Enanthate i-powder eluhlaza ithathwa njengenye yezona zinto zikhuselekileyo ze-anabolic zeemarike kwaye ithwala umlinganiselo ofanelekileyo wokhuseleko ukubuyisela eli bango. Ngapha koko, le steroid isetyenziswe ngempumelelo kunyanga abantwana abaphantsi komzimba kunye neentsana ngaphambi kwexesha. Ikwabhalelwe i-osteoporosis kunye nesarcopenia.
Umthombo we-Genius AAS Raw ukuba Uqwalaselwe Ngaphambi kokuthenga
Xa kuziwa kwizinto ezibonakalayo zokuvelisa i-steroid, abaninzi banokukhawuleza bayiqwalasele imveliso efumaneka eChina. Yilapha izinto ezibonakalayo zokuvelisa i-anabolic zithunyelwa kwamanye amazwe. Izixhobo ezirhafayo ze-steroids zaseChina ziyaziwayo ngezizathu ezininzi:
KuChina enomgangatho ophezulu.
Ukuthobela yonke imigangatho.
Ubukho bemvume yokuvelisa nokuthengisa.
Iimpompo zendalo kunye neyokuqala, ezingasetyenziselwa ukuvelisa.
Indawo yokugqibela yabaninzi abenzi be-steroids kubaluleke kakhulu. Oku kungenxa yokuba kuyindlela elula kuthengwa izinto eziyimveliso ze-steroids ezisuka eChina. Kukho inkampani ezininzi ezithintekayo kwiivenkile apha, kwaye akukho mfuneko yokubonelela ngamaphepha angeziwe ekuthengiseni iimpahla. Oku akuthethi ukuba e-China ungathenga izinto ezibonakalayo zokuvelisa ekhaya. Hayi, kukho iifemu ezinkulu kunye neenkampani ezithengisa iimpahla kuphela kubakhiqizi. Ukuthenga ngokwaneleyo imvume yokuvelisa kunye neziqinisekiso ezininzi zeempawu.
Ezinye iinkampani zidinga amaxwebhu angeziwe, ngoko ke ngaphambi kokuthenga ipowder yokuthengisa i-steroids, kungcono ukuqhagamshelana nenkampani kwaye ubuze ukuba yimaphi amaxwebhu ayifunayo. Kuphela emva koko, izinto ezisetyenziswayo ze-steroids ezisuka e-China zingathengwa kwaye ziswe ezweni apho kuveliswa khona i-anabolic kunye ne-androgenic steroid.
Kodwa, ngenxa yeelabhu ezantsi komhlaba (ugl) okanye uqobo, akunakwenzeka ukuba unikeze nayiphi na imirhumo okanye i-legit yokungenisa imibhalo yolu hlobo lwenjongo yezoshishino, kukho imithombo ejikeleze imarike ukufanisa loo mfuno. Ngoko, phambi kokuthenga kwakho impahla eluhlaza, zama ukufumana okulungileyo kunye nengqiqo, ukuzikhusela kwiimfakeko.
1. Uqinisekisa njani umgangatho wemveliso ngaphambi kokubeka iiodolo?
A: COA, HPLC, HNMR ziyafumaneka.
B: Amaphepha ovavanyo olwenziwa ngamalebhu umntu wesithathu uya kunikwa ixesha nexesha.
2.Uza kuqinisekisa njani ukuba imali yakho ikhuselekile?
Yonke i-odolo yepowder yethu eluhlaza inokubuyiselwa kwemali ngaphambi kokuba kuthunyelwe iimpahla.
Kuzo zonke iintlawulo kwi-AASraw, ziqinisekisiwe zokurhoxisa, ukuhlawula, ukudlulisela, okanye nayiphi na into esinokuyenza kwiminyaka eyi-5.
I-3.Ungaqinisekisa ubukho bakho?
Impahla yethu eluhlaza kwindawo yokugcina impahla yayilungiswe kwaye ilawulwa yinkqubo, eya kuqinisekisa ukunikezelwa ngexesha.
I-4.Ungayiqala njani iodolo kwaye wenze iintlawulo?
Ungasithumela i-oda lakho lokuthenga ukuba ngaba, okanye uthumele isiqinisekiso esilula nge-imeyile okanye nguMphathi wezeMveliso, ngoko sizakukuthumela i-Invoyisi ye-Proforma kunye neenkcukacha zethu zebhanki ngokuqinisekisile kwakho ukuhlawula njengezicelo zakho.
Izibonelelo ezivela kwi-Anabolic Steroids
Akukho ngaphantsi kweengcingo ezithintekayo ukusuka kumalabhu angaphantsi komhlaba, xa uzinzela yona.
Iindleko ezingaphantsi komjikelezo wakho ukusebenzisa izixhobo zakho ezikhethiweyo. Nangona umntu onemali engancinci unokufikelela ekuphupha komzimba.
Ukuthengisa ngokutsha impahla ye-AAS ukuze ityebi
Ukwakha i-brand yakho kunye nokuba yinto kule sangqa
Ukwenza uphando malunga nokusetyenziswa nokunceda abanye.
I-DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin) Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lweMisipha? Uphononongo lweSarm [2019 NTSHA]